အထနျမလေး မမေိုးယံ – My Blog
“ဆရာ့တပညျ့ကို ကွိုကျသလို ဆုံမပါဆရာ ကြှနျတျောတို့ခှငျ့ပွုပါတယျ” ကြှနျတျောက ဆေးတက်ကသိုလျတကျနတော။ မိဘက သိပျမခမျြးသာတော့ ၁၀တနျး ကြောငျးသူကြောငျးသားတှကေို ဂိုကျလုပျရငျး တဖကျတလှမျးက ကြောငျးစရိတျရှာတယျ။ အခု ဂိုကျလုပျပေးရမယျ့ကောငျမလေးက မမေိုးယံ။ တအိမျလုံး ရဲ့ အခဈြတျော တကယျ့ အဆိုးလေး။ သူ့မိဘတှကေ ကွိုကျသလိုဆုံးမပါပွောပမေယျ့ အသကျသိပျမကှာတဲ့ကောငျမလေးကို ရိုကျဆုံးမလို့ဖွဈပါ့မလား။ “ဒီတပုဒျကို ကြှနျတျောနဲ့တူတူ အလှတျဆိုကွညျ့ရအောငျ” ကြှနျတျောက စာကကျြဖို့ပွောပမေယျ့ မမေိုးယံက ဂဈြကနျကနျလုပျနသေညျ။တကယျတော့ ကောငျမလေးက ကြှနျတျောခြော့တာခံခငျြလို့ တမငျလုပျတာ။ ဆငျးရဲတဲ့ဘဝမှာ ရုပျရညျခြောမောတာ ယောကျြားလေးဖွဈစေ မိနျးကလေးဖွဈစေ သိပျမ ကောငျးဘူးဗြ။ ကြှနျတေျာ့ရညျမှနျခကျြက ဆရာဝနျဖွဈဖို့။ တပညျ့ကြောငျးသားတှနေဲ့ညီအကိုလိုနလေို့ဘာမှမဖွဈပမေယျ့ တပညျ့ကြောငျးသူတှကေကြ တော့ ကိုကွီးနဲ့ညီမလေး ဇာတျလမျးခငျးခငျြကွတယျ။ ကြှနျတျောသာ စိတျအလိုလိုကျမိရငျ ကြှနျတေျာ့ရညျမှနျးခကျြပကျြတာကွာပေါ့။သတိထားပွီးရှောငျ ရငျး သူတို့ကိုလညျး စာမေးပှဲအောငိသှားအောငျ ဂရုစိုကျရတယျ။
မမေိုးယံကကတြော့ မရဘူး။ဆိုးလှနျးတယျ။ ကြှနျတျော စာစသငျပွီး ၃ရကျလောကျထဲက အထာစပေးတာ။ ကြှနျတေျာ့ဘကျက မလိုကျလြောတော့ ဂဈြ တိုကျတာပေါ့။ “ဆရာဘာလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ကြှနျတျောလို့ပွောတာလဲ… စောစောက ဖုနျးဆကျတာ ဘယျသူလဲဆရာ “ စသဖွငျ့ စာနဲ့မဆိုငျတဲ့ကိစ်စတှေ သိပျပွောတာ။ အတိုအပကျြ အဟိုကျတှဝေတျပွီး ပလူးပလဲလာလုပျရငျ ယောကျြားပဲ လီးတောငျတာပေါ့။ဆှဲပွီး နို့စို့ပဈ လိုးပဈလိုကျခငျြတာပေါ့။ ၁၆နှဈ ၁၀တနျးသာပွောတယျ မမေိုးယံရဲ့နို့ကွီးက အကွီးကွီး။ အဟိုကျဝတျပွီး ကြှနျတေျာ့နားကပျထိုငျတဲ့ အခြိနျတိုငျး ကြှနျတေျာ့လီးကွီးက တောငျလှနျးပွီး အတှငျးခံထဲမှာနရေတော့ အောငျ့တောငျအောငျ့နတေယျ။ ၆လကျမလောကျစကပျလေးတှပေဲအမွဲဝတျတော့ g string ဝတိထားတဲ့ သူမစောကျဖုတျနရော က လှုပျရှားတိုငျး မွငျနရေတာ။ “အိမျက လူတှရေော မမေိုးယံ” “ဘုရားကိုးဆူ ဖိတျလို့ သှားကွတယျ ဆရာ” ကြှနျတျောစိတျညဈတယျ။ အိမျမှာ လူတဈ ယောကျမှ မရှိတော့ကြှနျတျောနဲ့သူနဲ့ ၂ယောကျထဲ။ ပွီးတော့ စာလှတျလှတျလပျလပျသငျရအောငျဆိုပွီး မမေိုးယံ အခနျးထဲမှာ စာသငျရတာ။ အခနျးက ကယျြတဲ့အပွငျ အသံလုံစနဈပါတော့ တျောရုံတနျရုံဆို ဘယျသူမှ မကွားနိုငျဘူး။ ဒါ့အပွငျ အဲ့ဒီအိမျကလူတှကေ ကြှနျတျောတို့စာသငျနတောကို ဘယျသူမှ လာမကွညျ့ကွတာပဲ။ မမေိုးယံက အားကစားဘျောလီလိုဟာလေးဝတျထားတယျ။ဗိုကျသားလေးက ဖှေးဥပွီး နို့တှကေ ဘျောလီရဲ့အပျေါကိုထှကျနတေယျ။ စကပျက ထုံးစံအတိုငျးအတိုလေး။
“စာသငျရအောငျမမေိုးယံ” “ဟငျ့အငျး” “ဘာ” “နတေို့ငျးစာသငျရတာပငျြးတယျဆရာ တဈခါတလအေခဈြကွောငိးသငျရအောငျလဆေရာ” မေးမိုးယံက ပွောပွီး ကြှနျတေျာ့ကို ညို့မကျြဝနျးတှနေဲ့ စိုကျကွညျ့တယျ။ “ပွှတျ ပွှတျ” မနနေိုငျတော့လို့ သူမနှုတျခမျးကို ဆှဲနမျးလိုကျတယျ။သူမကလညျးအလိုကျသငျ့။ “ဆရာ့ အိုးးးးး ဆရာ အမလေး အိုးးးးး” မမေိုးယံရဲ့အကငြ်္ီလေးကို မခြှတျပေးပွီး သူမရဲ့ နို့သီးလေးကို နာနာလေးစို့ပေးလိုကျတယျ။ “ဆကျလုပျလေ ဆရာ” “တျောပွီ စာတပုဒျရမှာ တခါလုပျပေးမှာ” “အာ ဆရာညဈတယျ သမီးစာကကြိပါ့မယျ ခုတခါတော့လုပျပါ ဆရာရယျ” “မလုပျဖူး။စာရမှဆို စာရမှ” “အငျး ကကျြမယျ ဘယျဟာကကျြရမှာလဲ” ကြှနျတျောထနျနပေမေယျ့ စောငျ့စညျးလိုကျတာမှနျသှားတယျ။မမေိုးယံက စာထဲကိုစိတျနှဈပွီး သခြောကကျြနေ တော့တာ။ “ရပွီဆရာ” “ရပွီလား မွနျတာ အလှတျခရြေး” သူမ ရေးပွပွီးတဲ့နျော ကနြျောလညျး နို့တှေ လှနျစို့ပဈလိုကျတယျ။ “အား ဆရာ ခံလို့ကောငျး လိုကျတာဆရာရယျ ရှီး အိုးးးးး အိုးးးးး ခဈြလိုကျတာ ဆရာကိုခဈြလိုကျတာ” စာစဈပွီးပွီးခငျြး နို့စို့ပေးလိုကျတော့ လိငျပညာပေးတှေ ဘယျလိုပဲရှိပမေယျ့ အပြိုစငျ အပြိုးရိုငျးလေးဆိုတော့ နို့လေးစို့တာနဲ့ အသံမြိုးစုံထှကျအောငျ ငွီးငွူနတေော့တာ။
“မရပျပါနဲ့အုံးဆရာရဲ့ ခံလို့မဝသေးဘူး” “နောကျတပုဒျရမှ တခါ” “ဆရာကလညျး” “မကနြေပျဖူးလား” “ကနြေပျပါတယျ ကနြေပျပါတယျ ဆရာလူဆိုး ကွီးရဲ့” ခုမှ နညျးလမျးကောငျးရတော့တယျ။အရှိနျပကျြလို့အနခေကျပမေယျ သူလညျးစာရ ကြှနျတျောလညျးစားရမဟုတျလား။ “အား ကွမျးလိုကျတာ ဆရာ ရယျ” နို့ကွီးက ကိတျပမေယျ့ အပြိုနို့ဆိုတော့ နုနုလေးရယျ။ ကြှနျတျောအားနဲ့ ညှဈကိုငျလိုကျရငျ သူ့ခမြာငိုသံတောငျပါတယျ။ အခုထိ နို့ကိုငျနို့စို့ ပေးရုံပံရှိ သေးတယျ။စောကျဖုတျကို လိုးမပေးသေးဘူး။ “ပွနျတော့မှာလားဆရာ” “အငျး ပွနျတော့မယျလေ” “မနကျဖွနျရော ဒီလိုပဲလားဆရာ” “အငျးပေါ့။ ဒါမဲ့ ကကျြပွီးသားတှပွေနျမသှေ့ားရငျ ဒါဏျပေးမှာနျော” “ဘယျလိုဒါဏျလဲ” “ကြှနျတျောမလာဘဲ နမှောပေါ့” စာသငျရတာတျောတျောအဆငျပွလောတယျ။ တခု တော့ရှိတာပေါ့။သူမရာသီလာနတေဲ့အခြိနျလညျး ကြှနျတျောက မရှံမရှာစောကျဖုတျနှိုကျပေးရတယျ။ လိုးတော့ လိုးမပေးရသေးဘူး။
“အဟငှ့းးးးးအငှးးးး အားးးလုပှးးးးအားးးး မရပျနဲ့ဆရာ မွနျမွနျးးးအားးးမွနျမွနျလို့းးး အားပွီးပွီးးးးးကောငျးလိုကျတားးးးးအားးး” “စာကကျြတော့းးး” “နေ ပါအုံးဆရာရဲ့ ဒီမှာမောနတောကိုး ကွငျကွငျနာနာကို မရှိဘူး” သူမစိတျကောကျပွီးစာမကကျြမှာစိုးလို့ သူမကိုနောကျက သိုငျးဖကျပွီး နို့သီးလေးတှကေို ခြေ ပေးနလေိုကျတယျ။ တကယျတော့ ကြှနျတျောလညျး သူမနို့လေးတှကေို စှဲလနျးတကျနပွေီ။ မမေိုးယံရဲ့နို့အုံထှားထှားပွီးကို အားရပါးရညှဈရတာ ကွိုကျသညျ။နို့သီးလေးတှကေို အားနဲ့ ညှဈခလြေိုကျတိုငျး သူမကေ့ာတကျသှားတာကို သဘောကသြညျ။ နို့သီးသေးသေးလေးကို ငုံစို့တိုငျး မမေိုးယံရဲ့ ငွီး သံလေးကို ကြှနျတျောကွိုကျသညျ။ အိမျရောကျလို့ ဆေးကြောငျးကစာတှကေကျြမယျလုပျတိုငျး မမေိုးယံရဲ့နို့ကွီးတှပေျေါပျေါလာလျု့ အာရုံလှဲပဈရသညျ။ “ချးးးချးး ခံလို့ကောငျးလိုကျတားးဆရာ ဘယျလိုလုပျလုပျ ခံလို့ကောငျးနတောပဲ သိလား” နို့သီးလေးတှကေို ဖှဖှခပြေေးတော့ ကြှနျတေျာ့ ရငျခှငျကို မှီရငျး မကျြလုံးလေးတှစေငျးလို့။ “သမီးကို မလိုးခငျြဘူးလားဆရာရယျ” “လိုးမှာပေါ့” “ခုလား” “လပါတျမှာ ဘာသာစုံဂုဏျထူးထှကျရငျ” “ဟငျးးး တလမှ တ ခါထဲပေါ့” “ဘာလို့လဲ” “စာမေးပှဲကို တပတျတကွိမျပါလားဆရားး စာလညျးကြေ လူလညျးကပြေေါ့ — အဟိ “ “တျောပွီ ကလေးမ စာကကျြတော့” “ဒီ တိုငျး ဆရာ့ရငျခှငျထဲမှာနပွေီးကကျြမယျ” သူ ကနြေပျသှားအောငျ တဈခါတလတေော့ဆိုနှဲ့ခှငျ့ပေးလိုကျတယျ။ သူမ စာမေးပှဲပွီးတဲ့အထိ ကြှနျတေျာ့စိတျကူး အတိုငျး လုပျလို့မဖွဈ။သူမ တက်ကသိုလျပထမနှဈစတကျတဲ့ နကေ့မြှ နှိတျစကျစရာ လကျနကျပေါငျးစုံနဲ့ ကောငျးကောငျးကွီး နှိတျစကျပွီး လိုးပေးလိုကျမယျ လို့ ကြှနျတျောတှေးထားတယျ။
“စာစဈပွီးပွီလားဆရားးးး” “အငျးးးးးရော့ စာအုပျတှေးးးး” “ဟယှးးးး all D” “ဆရာ့းးးးးး” “အားးး နအေုံး” “ဆရာနျော ကတိမဖကျြနဲ့းး” “ကှနျ ဒုံးထုတျမလို့းးးး မငျးလေးကိုလိုးဖို့းးးး မငျးလေးရဲ့ စောကျပတျကို အသလေိုးဖို့းးး” ကြှနျတေျာ့အပွောကို မမေိုးယံက တခဈခဈနဲ့ ရယျသညျ။ ရယျနတေဲ့ မေ မိုးယံရဲ့နှုတျခမျးလေးကို ဆှဲစုပျလိုကျသညျ။ လညျပငျး ကွော့ကွော့လေးကလညျး မှေးပြံ့လို့။အရာထငျအောငျလုပျလို့မဖွဈ။ ပွှတျးးးးပွှတျးးး “အားးးးး ခှးးးခှးးခစှလိုကတှာ ဆရာရယှးးးးး” နို့လေးတှကေို စို့တဲ့အပွငျ့ သှားနဲ့ပါ ခပျဖှဖှကိုကျလိုကျတော့ မမေိုးယံ ထှနျ့ထှနျ့လူးရော။ ကြှနျတေျာ့လီးကိုလညျး လှမျးကိုငျတယျ။ လဥတှကေိုလညျး လကျနဲ့နယျတယျ။ နို့စို့ပေးရငျး မမေိုးယံရဲ့စောကျပကျကိုကိုကွညျ့တော့ အရညျကွညျလေးတှေ။ “အားးးး ဟငျ့ဟငျ့းးး ဆရာရယျ” အရညျလေးတှပေိုထှကျလာအောငျ စောကျစိ လေးကိုခတြေော့ မမေိုးယံရဲ့ ငွီးသံလေးတှေ ပိုကယျြလာသညျ။
“အားးးးနာတယှးးဆရာ” အရညျတှရှေမျးနပေမေယျ့ လီးထညျ့လိုကျတော့ အပြိုမွှေးကခံနသေညျ။ “ရတယျဆရားးးလုပျးးးးးသမီးအောငျ့ခံပါ့မယျ” ကြှနျတျောငွိုငွငျမှာစိုးလို့ အောငျ့ခံမယျဆိုသောကောငျမလေးကို ကြှနျတျော သနားလာမိသညျ။သူ့မကျြနှာကိုကွညျ့တော့ အံကွိတျရငျး မကျြရညျလေးတှေ စီးကနြသေညျ။ သူမအနာသကျသာအောငျ နို့လကေိုစို့ပေးလိုကျ စောကျစိလေးကို ကလိပေးလိုကျလုပျလို့ ငွီးသံထှကျလာတော့မှ လီးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးဖိ သှငျးလိုကျသညျ။ “ဆောငျ့ပေးဆရားးးဆောငျ့ပေးးအိုးးးးး နာနာလေးဆောငျ့” “ဆရာလို့မချေါနဲ့ကှားးးကိုကိုလို့ချေါ” “ယောကျြားလို့ချေါခငျြတယျ ဆရာ” “ချေါကှားး” “အားးးအမလေးးးယောကျြားးးလိုးးးလိုးး နာနာလေးဆောငျ့လိုးပါယောကျြားရဲ့းးးးးအားးးးအမလေးးးသပေါပွီးး” “လိုးပွီ… မိနျးမရာ အား….” “အငျးးးလိုးပေးယောကျြား မိနျးမစကျပကျ ကှဲအောငျလိုးပေး အားးးးအားးးးကောငှးတယှးးးအားးး” “ယောကျြားလီးကွီးနဲ့ မိနျးမစကျပကျကို လိုးနပှေီးးး အားးး” မမေိုးယံက အသံပေါငျးစုံနဲ့ ညာသံပေးပွီး အလိုးခံနတေော့ ကြှနျတျောလညျး ပိုထနျ လာပွီး သူမနို့ကွီးတှေ ကိုငျဆှဲပွီး မီးကုနျ ယမျးကုနျ လိုး ပေးသညျ။ “မိနျးမမွော့သှားတဲ့အထိလိုးပေးနျော ယောကျြားရယျ” “အသလေိုးမယျကှာ….. အငျ့ အငျ့” “ယောကျြားလိုးတာခံရတာ ကွိုကျလို့ပါနျော” “အားးးးးယောကျြားရေးးးအမလေးးးး ပွီးတော့မယျးးးးးအားးးးယောကျကြားရေးးး” “လိုးပွီ…. လိုးပွီကှာ…. စောငျ့လိုးပွီ…အားးး” “အးး အးးပှီးပှီးးး အားးး” လီးကို တဆုံးထိ စောငျ့လိုးရငျး မမေိုးယံ စောကျပတျထဲကို လရညျအပွညျ့ထညျ့ပေး လိုကျရတာ တနလေုံးပဲ။
“ဆရာ့တပည့်ကို ကြိုက်သလို ဆုံမပါဆရာ ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်” ကျွန်တော်က ဆေးတက္ကသိုလ်တက်နေတာ။ မိဘက သိပ်မချမ်းသာတော့ ၁၀တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ဂိုက်လုပ်ရင်း တဖက်တလှမ်းက ကျောင်းစရိတ်ရှာတယ်။ အခု ဂိုက်လုပ်ပေးရမယ့်ကောင်မလေးက မေမိုးယံ။ တအိမ်လုံး ရဲ့ အချစ်တော် တကယ့် အဆိုးလေး။ သူ့မိဘတွေက ကြိုက်သလိုဆုံးမပါပြောပေမယ့် အသက်သိပ်မကွာတဲ့ကောင်မလေးကို ရိုက်ဆုံးမလို့ဖြစ်ပါ့မလား။ “ဒီတပုဒ်ကို ကျွန်တော်နဲ့တူတူ အလွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်” ကျွန်တော်က စာကျက်ဖို့ပြောပေမယ့် မေမိုးယံက ဂျစ်ကန်ကန်လုပ်နေသည်။တကယ်တော့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော်ချော့တာခံချင်လို့ တမင်လုပ်တာ။ ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမှာ ရုပ်ရည်ချောမောတာ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ မိန်းကလေးဖြစ်စေ သိပ်မ ကောင်းဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်ချက်က ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့။ တပည့်ကျောင်းသားတွေနဲ့ညီအကိုလိုနေလို့ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တပည့်ကျောင်းသူတွေကကျ တော့ ကိုကြီးနဲ့ညီမလေး ဇာတ်လမ်းခင်းချင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်သာ စိတ်အလိုလိုက်မိရင် ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ပျက်တာကြာပေါ့။သတိထားပြီးရှောင် ရင်း သူတို့ကိုလည်း စာမေးပွဲအောငိသွားအောင် ဂရုစိုက်ရတယ်။
မေမိုးယံကကျတော့ မရဘူး။ဆိုးလွန်းတယ်။ ကျွန်တော် စာစသင်ပြီး ၃ရက်လောက်ထဲက အထာစပေးတာ။ ကျွန်တော့်ဘက်က မလိုက်လျောတော့ ဂျစ် တိုက်တာပေါ့။ “ဆရာဘာလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်တော်လို့ပြောတာလဲ… စောစောက ဖုန်းဆက်တာ ဘယ်သူလဲဆရာ “ စသဖြင့် စာနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေ သိပ်ပြောတာ။ အတိုအပျက် အဟိုက်တွေဝတ်ပြီး ပလူးပလဲလာလုပ်ရင် ယောက်ျားပဲ လီးတောင်တာပေါ့။ဆွဲပြီး နို့စို့ပစ် လိုးပစ်လိုက်ချင်တာပေါ့။ ၁၆နှစ် ၁၀တန်းသာပြောတယ် မေမိုးယံရဲ့နို့ကြီးက အကြီးကြီး။ အဟိုက်ဝတ်ပြီး ကျွန်တော့်နားကပ်ထိုင်တဲ့ အချိန်တိုင်း ကျွန်တော့်လီးကြီးက တောင်လွန်းပြီး အတွင်းခံထဲမှာနေရတော့ အောင့်တောင်အောင့်နေတယ်။ ၆လက်မလောက်စကပ်လေးတွေပဲအမြဲဝတ်တော့ g string ဝတိထားတဲ့ သူမစောက်ဖုတ်နေရာ က လှုပ်ရှားတိုင်း မြင်နေရတာ။ “အိမ်က လူတွေရော မေမိုးယံ” “ဘုရားကိုးဆူ ဖိတ်လို့ သွားကြတယ် ဆရာ” ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်။ အိမ်မှာ လူတစ် ယောက်မှ မရှိတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ ၂ယောက်ထဲ။ ပြီးတော့ စာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ရအောင်ဆိုပြီး မေမိုးယံ အခန်းထဲမှာ စာသင်ရတာ။ အခန်းက ကျယ်တဲ့အပြင် အသံလုံစနစ်ပါတော့ တော်ရုံတန်ရုံဆို ဘယ်သူမှ မကြားနိုင်ဘူး။ ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေက ကျွန်တော်တို့စာသင်နေတာကို ဘယ်သူမှ လာမကြည့်ကြတာပဲ။ မေမိုးယံက အားကစားဘော်လီလိုဟာလေးဝတ်ထားတယ်။ဗိုက်သားလေးက ဖွေးဥပြီး နို့တွေက ဘော်လီရဲ့အပေါ်ကိုထွက်နေတယ်။ စကပ်က ထုံးစံအတိုင်းအတိုလေး။
“စာသင်ရအောင်မေမိုးယံ” “ဟင့်အင်း” “ဘာ” “နေ့တိုင်းစာသင်ရတာပျင်းတယ်ဆရာ တစ်ခါတလေအချစ်ကြောငိးသင်ရအောင်လေဆရာ” မေးမိုးယံက ပြောပြီး ကျွန်တော့်ကို ညို့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ်” မနေနိုင်တော့လို့ သူမနှုတ်ခမ်းကို ဆွဲနမ်းလိုက်တယ်။သူမကလည်းအလိုက်သင့်။ “ဆရာ့ အိုးးးးး ဆရာ အမလေး အိုးးးးး” မေမိုးယံရဲ့အင်္ကျီလေးကို မချွတ်ပေးပြီး သူမရဲ့ နို့သီးလေးကို နာနာလေးစို့ပေးလိုက်တယ်။ “ဆက်လုပ်လေ ဆရာ” “တော်ပြီ စာတပုဒ်ရမှာ တခါလုပ်ပေးမှာ” “အာ ဆရာညစ်တယ် သမီးစာကျကိပါ့မယ် ခုတခါတော့လုပ်ပါ ဆရာရယ်” “မလုပ်ဖူး။စာရမှဆို စာရမှ” “အင်း ကျက်မယ် ဘယ်ဟာကျက်ရမှာလဲ” ကျွန်တော်ထန်နေပေမယ့် စောင့်စည်းလိုက်တာမှန်သွားတယ်။မေမိုးယံက စာထဲကိုစိတ်နှစ်ပြီး သေချာကျက်နေ တော့တာ။ “ရပြီဆရာ” “ရပြီလား မြန်တာ အလွတ်ချရေး” သူမ ရေးပြပြီးတဲ့နော် ကျနော်လည်း နို့တွေ လှန်စို့ပစ်လိုက်တယ်။ “အား ဆရာ ခံလို့ကောင်း လိုက်တာဆရာရယ် ရှီး အိုးးးးး အိုးးးးး ချစ်လိုက်တာ ဆရာကိုချစ်လိုက်တာ” စာစစ်ပြီးပြီးချင်း နို့စို့ပေးလိုက်တော့ လိင်ပညာပေးတွေ ဘယ်လိုပဲရှိပေမယ့် အပျိုစင် အပျိုးရိုင်းလေးဆိုတော့ နို့လေးစို့တာနဲ့ အသံမျိုးစုံထွက်အောင် ငြီးငြူနေတော့တာ။
“မရပ်ပါနဲ့အုံးဆရာရဲ့ ခံလို့မဝသေးဘူး” “နောက်တပုဒ်ရမှ တခါ” “ဆရာကလည်း” “မကျေနပ်ဖူးလား” “ကျေနပ်ပါတယ် ကျေနပ်ပါတယ် ဆရာလူဆိုး ကြီးရဲ့” ခုမှ နည်းလမ်းကောင်းရတော့တယ်။အရှိန်ပျက်လို့အနေခက်ပေမယ် သူလည်းစာရ ကျွန်တော်လည်းစားရမဟုတ်လား။ “အား ကြမ်းလိုက်တာ ဆရာ ရယ်” နို့ကြီးက ကိတ်ပေမယ့် အပျိုနို့ဆိုတော့ နုနုလေးရယ်။ ကျွန်တော်အားနဲ့ ညှစ်ကိုင်လိုက်ရင် သူ့ခမျာငိုသံတောင်ပါတယ်။ အခုထိ နို့ကိုင်နို့စို့ ပေးရုံပံရှိ သေးတယ်။စောက်ဖုတ်ကို လိုးမပေးသေးဘူး။ “ပြန်တော့မှာလားဆရာ” “အင်း ပြန်တော့မယ်လေ” “မနက်ဖြန်ရော ဒီလိုပဲလားဆရာ” “အင်းပေါ့။ ဒါမဲ့ ကျက်ပြီးသားတွေပြန်မေ့သွားရင် ဒါဏ်ပေးမှာနော်” “ဘယ်လိုဒါဏ်လဲ” “ကျွန်တော်မလာဘဲ နေမှာပေါ့” စာသင်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်။ တခု တော့ရှိတာပေါ့။သူမရာသီလာနေတဲ့အချိန်လည်း ကျွန်တော်က မရွံမရှာစောက်ဖုတ်နှိုက်ပေးရတယ်။ လိုးတော့ လိုးမပေးရသေးဘူး။
“အဟငှ့းးးးးအငှးးးး အားးးလုပှးးးးအားးးး မရပ်နဲ့ဆရာ မြန်မြန်းးးအားးးမြန်မြန်လို့းးး အားပြီးပြီးးးးးကောင်းလိုက်တားးးးးအားးး” “စာကျက်တော့းးး” “နေ ပါအုံးဆရာရဲ့ ဒီမှာမောနေတာကိုး ကြင်ကြင်နာနာကို မရှိဘူး” သူမစိတ်ကောက်ပြီးစာမကျက်မှာစိုးလို့ သူမကိုနောက်က သိုင်းဖက်ပြီး နို့သီးလေးတွေကို ချေ ပေးနေလိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူမနို့လေးတွေကို စွဲလန်းတက်နေပြီ။ မေမိုးယံရဲ့နို့အုံထွားထွားပြီးကို အားရပါးရညှစ်ရတာ ကြိုက်သည်။နို့သီးလေးတွေကို အားနဲ့ ညှစ်ချေလိုက်တိုင်း သူမကေ့ာတက်သွားတာကို သဘောကျသည်။ နို့သီးသေးသေးလေးကို ငုံစို့တိုင်း မေမိုးယံရဲ့ ငြီး သံလေးကို ကျွန်တော်ကြိုက်သည်။ အိမ်ရောက်လို့ ဆေးကျောင်းကစာတွေကျက်မယ်လုပ်တိုင်း မေမိုးယံရဲ့နို့ကြီးတွေပေါ်ပေါ်လာလ်ု့ အာရုံလွဲပစ်ရသည်။ “ခ်းးးခ်းး ခံလို့ကောင်းလိုက်တားးဆရာ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ခံလို့ကောင်းနေတာပဲ သိလား” နို့သီးလေးတွေကို ဖွဖွချေပေးတော့ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ကို မှီရင်း မျက်လုံးလေးတွေစင်းလို့။ “သမီးကို မလိုးချင်ဘူးလားဆရာရယ်” “လိုးမှာပေါ့” “ခုလား” “လပါတ်မှာ ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးထွက်ရင်” “ဟင်းးး တလမှ တ ခါထဲပေါ့” “ဘာလို့လဲ” “စာမေးပွဲကို တပတ်တကြိမ်ပါလားဆရားး စာလည်းကျေ လူလည်းကျေပေါ့ — အဟိ “ “တော်ပြီ ကလေးမ စာကျက်တော့” “ဒီ တိုင်း ဆရာ့ရင်ခွင်ထဲမှာနေပြီးကျက်မယ်” သူ ကျေနပ်သွားအောင် တစ်ခါတလေတော့ဆိုနွဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ သူမ စာမေးပွဲပြီးတဲ့အထိ ကျွန်တော့်စိတ်ကူး အတိုင်း လုပ်လို့မဖြစ်။သူမ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်စတက်တဲ့ နေ့ကျမှ နှိတ်စက်စရာ လက်နက်ပေါင်းစုံနဲ့ ကောင်းကောင်းကြီး နှိတ်စက်ပြီး လိုးပေးလိုက်မယ် လို့ ကျွန်တော်တွေးထားတယ်။
“စာစစ်ပြီးပြီလားဆရားးးး” “အင်းးးးးရော့ စာအုပ်တွေးးးး” “ဟယှးးးး all D” “ဆရာ့းးးးးး” “အားးး နအေုံး” “ဆရာနော် ကတိမဖျက်နဲ့းး” “ကွန် ဒုံးထုတ်မလို့းးးး မင်းလေးကိုလိုးဖို့းးးး မင်းလေးရဲ့ စောက်ပတ်ကို အသေလိုးဖို့းးး” ကျွန်တော့်အပြောကို မေမိုးယံက တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်သည်။ ရယ်နေတဲ့ မေ မိုးယံရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်သည်။ လည်ပင်း ကြော့ကြော့လေးကလည်း မွှေးပျံ့လို့။အရာထင်အောင်လုပ်လို့မဖြစ်။ ပြွတ်းးးးပြွတ်းးး “အားးးးး ခှးးးခှးးခစှလိုကတှာ ဆရာရယှးးးးး” နို့လေးတွေကို စို့တဲ့အပြင့် သွားနဲ့ပါ ခပ်ဖွဖွကိုက်လိုက်တော့ မေမိုးယံ ထွန့်ထွန့်လူးရော။ ကျွန်တော့်လီးကိုလည်း လှမ်းကိုင်တယ်။ လဥတွေကိုလည်း လက်နဲ့နယ်တယ်။ နို့စို့ပေးရင်း မေမိုးယံရဲ့စောက်ပက်ကိုကိုကြည့်တော့ အရည်ကြည်လေးတွေ။ “အားးးး ဟင့်ဟင့်းးး ဆရာရယ်” အရည်လေးတွေပိုထွက်လာအောင် စောက်စိ လေးကိုချေတော့ မေမိုးယံရဲ့ ငြီးသံလေးတွေ ပိုကျယ်လာသည်။
“အားးးးနာတယှးးဆရာ” အရည်တွေရွမ်းနေပေမယ့် လီးထည့်လိုက်တော့ အပျိုမြှေးကခံနေသည်။ “ရတယ်ဆရားးးလုပ်းးးးးသမီးအောင့်ခံပါ့မယ်” ကျွန်တော်ငြိုငြင်မှာစိုးလို့ အောင့်ခံမယ်ဆိုသောကောင်မလေးကို ကျွန်တော် သနားလာမိသည်။သူ့မျက်နှာကိုကြည့်တော့ အံကြိတ်ရင်း မျက်ရည်လေးတွေ စီးကျနေသည်။ သူမအနာသက်သာအောင် နို့လေကိုစို့ပေးလိုက် စောက်စိလေးကို ကလိပေးလိုက်လုပ်လို့ ငြီးသံထွက်လာတော့မှ လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖိ သွင်းလိုက်သည်။ “ဆောင့်ပေးဆရားးးဆောင့်ပေးးအိုးးးးး နာနာလေးဆောင့်” “ဆရာလို့မခေါ်နဲ့ကွားးးကိုကိုလို့ခေါ်” “ယောက်ျားလို့ခေါ်ချင်တယ် ဆရာ” “ခေါ်ကွားး” “အားးးအမလေးးးယောက်ျားးးလိုးးးလိုးး နာနာလေးဆောင့်လိုးပါယောက်ျားရဲ့းးးးးအားးးးအမလေးးးသေပါပြီးး” “လိုးပြီ… မိန်းမရာ အား….” “အင်းးးလိုးပေးယောက်ျား မိန်းမစက်ပက် ကွဲအောင်လိုးပေး အားးးးအားးးးကောငှးတယှးးးအားးး” “ယောက်ျားလီးကြီးနဲ့ မိန်းမစက်ပက်ကို လိုးနပှေီးးး အားးး” မေမိုးယံက အသံပေါင်းစုံနဲ့ ညာသံပေးပြီး အလိုးခံနေတော့ ကျွန်တော်လည်း ပိုထန် လာပြီး သူမနို့ကြီးတွေ ကိုင်ဆွဲပြီး မီးကုန် ယမ်းကုန် လိုး ပေးသည်။ “မိန်းမမြော့သွားတဲ့အထိလိုးပေးနော် ယောက်ျားရယ်” “အသေလိုးမယ်ကွာ….. အင့် အင့်” “ယောက်ျားလိုးတာခံရတာ ကြိုက်လို့ပါနော်” “အားးးးးယောက်ျားရေးးးအမလေးးးး ပြီးတော့မယ်းးးးးအားးးးယောက်ကျားရေးးး” “လိုးပြီ…. လိုးပြီကွာ…. စောင့်လိုးပြီ…အားးး” “အးး အးးပှီးပှီးးး အားးး” လီးကို တဆုံးထိ စောင့်လိုးရင်း မေမိုးယံ စောက်ပတ်ထဲကို လရည်အပြည့်ထည့်ပေး လိုက်ရတာ တနေလုံးပဲ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အထနျမလေး မမေိုးယံ
ကြှနျတေျာ့ သဲလေး နှငျ့ သူမတှကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးသူမြား